भारतीय रुपैयामा तीव्रदरमा लगातार अवमूल्यन किन ? - Everest Dainik - News from Nepal
भारतीय रुपैयामा तीव्रदरमा लगातार अवमूल्यन किन ?
नयाँदिल्ली, भदौ १६ । गत दुई वर्षयताकै सबभन्दा तीव्रगतिमा भारतीय अर्थतन्त्र वृद्धि भइरहेको छ। तर यति नै वेला भारतीय रुपियाँ भने तीव्र दरमा अवमूल्यन भइरहेको छ।
जुन महिनासम्मको त्रैमासिक आर्थिक आंकडा बमोजिम भारतको कुल गार्हस्थ उत्पादन ८.२ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। सो आँकडा अघिल्लो वर्ष उही अवधिमा केबल ५.५ प्रतिशत थियो।
याे पनि पढ्नुस प्रतिबन्धित भारुको समस्या समाधान गर्न रिजर्भ बैंकको टोली आज नेपाल आउँदै
तीव्र आर्थिक वृद्धि दरसहित भारत विश्वकै सबभन्दा द्रूत गतिमा अर्थतन्त्र बृद्धि हुने मुलुकमध्ये एक हो । भारतीय अर्थतन्त्रको आकार २.६ ट्रिलियन डलर भएकोको मानिन्छ।
आर्थिक वृद्धिका कारणमा उपभोक्ताले गर्ने खर्चमा भएको वृद्धि तथा उत्पादन क्षेत्रको प्रगति देखिएका छन्।
तर भारतीय रुपियाँको कुरा गर्ने हो भने यो अवधिमा भारतीय रुपैयाँ अमेरिकी डलरको तुलनामा निकै घटेको छ।
याे पनि पढ्नुस नोट साट्न नपाएसम्म ‘ताकेता’
लगातार पाँच महिनादेखि अवमूल्यन भइरहेको भारुको भाउ अगस्ट महिनामा मात्रै ३.६ प्रतिशतले घट्यो।
अन्य उदाउँदा अर्थतन्त्रहरूमा जस्तै भारतमा मुद्राको अवमूल्यन खासगरी अमेरिकाले चिनियाँ वस्तुहरूमा थप शुल्क लगाउने अनुमानका कारण भएको ठानिन्छ। सन् २०१८ को सुरुदेखि यता मात्रै भारुले १० प्रतिशत अवमूल्यन बेहोरिसक्यो।
याे पनि पढ्नुस नेपालमा तीनवटा दरका भारतीय नोट नचल्ने
यसका अन्य कारणमा बढ्दो व्यापार घाटाप्रतिको चिन्ता अनि बढ्दो इन्धन तथा उपभोग्य सामग्रीको मूल्य रहेका छन्।
कुल गार्हस्थ उत्पादनको वृद्धि दर राम्रो मानिए पनि कतिपय जानकार भन्छन्, यो वृद्धि दर लामो समय नजान सक्छ। बीबीसी
ट्याग्स: indian currency